my kitchen my life: lamb chops များ
lamb chops များ
ဒါတွေက တော့ room service အတွက် လုပ်ထားတဲ့ lamb chops ပါ။ sauce က mint gravy ပါ။ brown sauce နဲ့ mint sauce ကို ရောထားတာပါပဲ။ sauteed vegs N french fry , Grilled tomato n lamb chops တွေပါပဲ။ ဒီမှာ လည်း lamb chops တမျိုး တင်ဘူးပါတယ်။အဲ့ဒါက British restaurant အတွက်ပါ။
FilettoeCostolette D Agnello Salsato con Pesto Di olive Nere Liguri
Grilled lamb fillet and cutlets with roast gravy and black olive puree.
Agnello ဆိုတာက Lamb ကို ဆိုလိုတာပါ။ ဒီပွဲကတော့ အီတလီ ဆိုင်အတွက်ပါ။ olive puree ဆိုတာကလည်း ထူးထူးဆန်းဆန်း ဘာမှ မပါ ပါဘူး။ အောလစ်ကို blander နဲ့ရိုက်ထားပြီး olive oil . salt and pepper ပေါက်ပေးထားတာပါပဲ။ side dish အနေနဲ့ vegs N potatos ကို စိတ်ကြိုက်သာပေးတော့ဗျာ။
Posted by leo mark at 1:42 AM